Pacman: कसरी चरण-दर-चरण खेल्ने
पतंग अनलाइन नि: शुल्क खेल्नको लागि, तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
तपाईं साइटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, खेल स्क्रीनमा प्रदर्शन हुनेछ। तपाईं बस .णी हुनुहुन्छ हिट खेल र अब तपाईले मनपराउनु भएको कन्फिगरेसन चयन गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईंले खेल जितिसक्नुभयो भने तपाईं समतल हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कुल चौबीस स्तरहरू छन्.
अब तपाईले केहि उपयोगी बटन पाउनुहुनेछ। "आवाज थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्", बटन दिनुहोस्"प्ले"र खेल सुरु गर्नुहोस्, तपाईं सक्नुहुन्छ"रोक्नुहोस्"र"पुन: सुरू गर्नुहोस्"कुनै पनि समयमा।
उसले खान नपाई प्रत्येक र सबै क्यान्डीहरू खाने प्रबन्ध गर्दछ।
एक खेल भरिसकेपछि, क्लिक गर्नुहोस् "फेरी सुरु" फेरि सुरु गर्न।
प्याक-म्यान १ the s० को दशकबाट एक लोकप्रिय लोकप्रिय खेल चरित्र हो। थियो जापानी देशको मे २२, १ 1980 .० मा भिडियो गेममा ग्रहलाई प्रस्तुत गरियो। यो खेल months महिना पछि अमेरिकामा आइपुग्यो र चाँडै १०,००,००० प्रति बिक्रि भएको छापमा पुग्यो।
आर्केड संस्करणको साथमा, प्याक-म्यान पनि अटारी २,XNUMX०० को लागि बनाईएको छ। धेरै बर्षहरूमा, खेलले धेरै आधुनिक कन्सोलहरूको लागि दर्जनौं र अपडेट गरिएका दर्जनौं संस्करणहरू प्राप्त गरेको छ। ब्राजिलमा, चरित्र जो कम-कमको रूपमा परिचित भयो पनि एक सफल थियो।
प्रत्येक र प्रत्येक चीजको माथि, खेलको विचार भनेको एक पहेलो चरित्रलाई एक भूलभुलैँमा ट्याब्लेटहरू खाने सुपरिवेक्षण गर्नु हो। एकै साथ, खेलाडीले spec स्प्याक्टर्सबाट भाग्नुपर्दछ जुन उसलाई हराउन खोज्छ।
नाम्को शूटर गेमबाट फरक सर्त चाहन्थे, त्यस बखत सर्वसम्मति। सुरुमा, इवाटामीले पत्ता लगाए कि उनले चरित्रको लागि प्रेरणा रहेको छ टुक्रा बिना पिज्जा देखेर।
यद्यपि चरित्रको मूलसँग अन्य संस्करणहरू पनि छन्। इवाटामी आफैले भने को उपस्थिति पतंग जापानी लेखनबाट "कुची", मुखबाट प्रेरित भएको थियो.
यो सिर्जना भएको बित्तिकै, चरित्रको रूपमा चिनिन्थ्यो पतंग। जापानीजमा पक र प्याकको हिज्जे ठीक उस्तै छ, पाकु। देशको पौराणिक कथा अनुसार, यो थाहा थियो कि पाकुको ठूलो भूक थियो। यसका अतिरिक्त, शब्दले ओनोमाटोपोइआ जस्तो काम गर्दछ जब खाना खोल्दा मुख खोल्न र बन्द गर्न।
अर्कोतर्फ, Puck नाम अ a्ग्रेजीमा टाको जस्तो देखिन्छ। त्यसोभए जब खेल अमेरिकामा ल्याइएको थियो, नमकोले यसलाई प्याक-म्यान भनेर छनौट गर्यो।
यद्यपि यो जापानमा पहिलो पटक रिलीज भएको थियो, तर अमेरिका आउने बित्तिकै यसले पप संस्कृतिमा आफ्नो छाप छोडेको थियो। खेलको सफलता यति अचम्मको थियो कि केवल मा दशकको प्रकाशनले एक अरब डलर प्राप्त गर्‍यो, केवल अमेरिकामा खेल कोठामा।
अर्को दशकमा, मूल्य दुई गुणा बढी, अमेरिकी US २. billion बिलियनमा पुग्यो। आज, फ्रान्चाइजीले विश्वव्यापी रूपमा तेह्र अरब जम्मा गरेको छ। यसको मतलव यो ग्रहमा सबैभन्दा बढी नाफा हुनेको सूचीमा अन्तरिक्ष आक्रमणकर्ताहरूद्वारा (व्यावहारिक रूपमा चौध अरब अमेरिकी डलर) मात्र पार गर्न सकिन्छ।
आर्केडमा पहिलो संस्करण भएदेखि, प्याक-म्यानले तीस भन्दा बढी सिक्वेल्स जितेको छ। चरित्र अझै पनि खेल मा प्रस्तुत गर्दछ कि आफ्नो मताधिकार भन्दा पर जान्छ। सुपर स्मेश ब्रसमा, उदाहरणको रूपमा सेवा दिन, पहेंलो बल लडाकुहरू मध्ये एकको रूपमा छनौट गर्न सकिन्छ।
पाक्समान भनेको के हो?
पतंग एक इलेक्ट्रोनिक खेल द्वारा बनाईएको हो टारु इवातानी कम्पनी लाई Namco। मूल रूपमा १ 80 s० को दशकमा आर्केडका लागि उत्पादन गरिएको, यो आज धेरै नै खेलाइएको र लोकप्रिय खेलहरू मध्ये एक बन्यो, बहुविध कन्सोलहरूको लागि आधुनिक संस्करणहरू र अरू धेरैको लागि उत्तरक्रमहरू।
यो एक धेरै साधारण खेल हो: खेलाडी एक थियो एक मुख संग गोला टाउको त्यो खोलिन्छ र बन्द हुन्छ, ट्याब्लेटले भरिएको साधारण भूलभुलैयामा सेट र र चार भूतहरू कि उहाँलाई प्रेत। लक्ष्य थियो भूतहरूले प्रहार नगरीकन प्रत्येक ट्याब्लेट खानुहोस्जटिलताको प्रगतिशील दरमा।
१ XNUMX s० को दशकमा प्याक-म्यान भिडियो गेम कन्सोलमा सबैभन्दा धेरै प्रेम गरिएको र प्रख्यात पात्रहरू मध्ये एक हो। यसको सब भन्दा कान्छोमा पनि यसको लोकप्रियता छ, जसले यसको खेलहरू पनि खेल्दैनथ्यो।
र यदि तपाइँ यस लोभी थोरै पहेंलो चरित्रको प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, उनको फ्रैंचाइजीको बारेमा केहि रोचक ट्रिभियामा हेर्नुहोस्।
खेलको उद्देश्य हो भूतहरूले प्रहार नगरी भूतपूर्व टाइलहरू प्रत्येक खाने। जब एक ट्याब्लेटसँग टकराउँदा, यो पतंग यसलाई निल्छ र भूलभुलैयाबाट गायब हुनुपर्दछ। यदि खेलाडीले बिभिन्न ठाउँमा टाइल खान्छ भने, खेलाडी चरण पार गर्दछ। यदि खेलाडीले टाइलहरू प्रत्येक र हरेक मा निःशुल्क mazes मा खान्छ, उसले खेल जित्छ।
प्रयोगकर्ताद्वारा नियन्त्रित मात्र चालहरू हुन् दिशात्मक कुञ्जीहरू मार्फत अगाडि बढ्दै, अनुहार पछाडि, बाँया र दायाँ, स्प्याटरहरू बेवास्ता गर्ने र भूलभुलैको वरिपरि छरिएका ट्याब्लेटहरू खाने इरादेको साथ।
जब एक स्पेक्टर संग टकराउँदछ पतंग मर्छ, यसैले जीवन गुमाउँछ। खेलाडीको दुई अतिरिक्त जीवन छ, जुन स्क्रिनको तल पट्टीमा प्रदर्शित हुन्छन्। जब तपाईं जीवन गुमाउनुहुन्छ र अतिरिक्त जीवन प्रयोग गर्नुहुन्छ, चरणमा छोड्ने गोलीहरूको संख्या मृत्युको क्षणबाट अपरिवर्तित रहन्छ। पतंग, सबैजना चरणको प्रारम्भिक स्थितिमा फर्कन्छन्।
यस्तो अवस्थामा, चरण भर्न (वा खेल), खेलाडीले बाँकी ट्याब्लेटको बारेमा मात्र चिन्ता लिनु पर्छ। जब खेलाडीले स्प्याक्टरहरूसँग टकराव गरेर आफ्नो जीवन गुमाउँछ भने उनीहरूले खेल गुमाउँछन्।
स्पेक्ट्रा र गतिको पतंग वास्तवमा उस्तै हो, तर, मूल खेलको रूपमा, सुपर ट्याब्लेटले प्रतिशत कारकले स्पेक्ट्रालाई ढिला बनाउँदछ र यसलाई पनि दिनुहोस् Pacman तिनीहरूलाई भस्म।
जब उनीहरू खाइन्छन्, केवल "भूत आँखाहरू" रहन्छन्, जुन चक्रव्यूहाको केन्द्रमा फर्कनुपर्दछ, जहाँ जासूसका बाँकी रहेका वस्तुहरू फेरि स्पट हुन्छन्। Pacman। प्रत्येक र प्रत्येक चरणमा त्यहाँ चार सुपर ट्याबलेटहरू छन्। विकासकर्ताले निर्धारण गर्दछ सुपर ट्याब्लेट कति लामो हुन्छ।
प्रत्येक भस्म ट्याब्लेट १० अंकको लायक हुन्छ, प्रत्येक भस्म सुपर ट्याब्लेटको मूल्य एक सय अ points्क हो, र प्रत्येक भस्म गरीएको स्पेक्टरको मूल्य दुई सय अ points्क छ। खेल कम्तिमा २ चरणमा हुनुपर्दछ।
सुश्री पीएसी म्यान
खेल सिर्जना गर्दा, Toru Iwatani कम हिंसात्मक र हिंसात्मक ढाँचा मा महिला दर्शकहरु आकर्षित गर्न चाहान्थ्यो। यसको बाबजुद पनि, खेल कोठाहरू प्राय: पुरुष खाली स्थानहरूमा जारी रह्यो। त्यसकारण, विकासकर्ताले नयाँ वैकल्पिक विकल्प सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
यद्यपि समाधान अनपेक्षित रूपमा बाहिर निस्कियो। प्याक-म्यानको सफलताले खेल क्रेजी ओटोको सिर्जनालाई प्रेरित गर्‍यो। लगभग समान गेमप्ले र मूल अक्षरको महिला संस्करणको साथ, खेलको नमकोसँग कुनै सम्बन्ध थिएन।
त्यसो भए, मिडवे, जससँग संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्याक-म्यानको अधिकार छ, क्रेजी ओटो किनेको थियो र यसलाई सुश्री प्याक-म्यानको नामले जारी गर्‍यो। खेलले नयाँ mazes र अधिक गति जस्ता आविष्कारहरू ल्यायो।
खेलहरूमा सफलताको लगत्तै पछि, फ्रान्चाइजीले अन्य मिडियामा आकर्षण प्राप्त गर्‍यो। १ XNUMX .० मा, चरित्रले भनिन्छ एक एनिमेटेड श्रृंखलाको लागि संस्करण जित्यो पीएसी म्यान ज्वरो। डिजाईन हन्ना-बारबेरा द्वारा निर्माण गरिएको थियो, जुन फ्लिन्टस्नेस र जेट्सनजस्ता परम्परागत ब्रान्डका लागि जिम्मेवार थियो।
यस बाहेक, चरित्र को पहिलो पाल्तु जनावर थियो भिडियो खेलहरू। यसको पहिलो उपस्थिति पछि, यसमा ब्रान्ड गरिएको उत्पादनहरू जस्तै पुतली, टी-शर्ट, ब्याकप्याक्स र अधिक बढि छन्। यो छिटो मिडिया बाहिर सबैभन्दा मान्यता प्राप्त खेल नामहरू मध्ये एक भयो।
अन्तमा, खेलको ग्रहमा यसको प्रभाव यस्तो छ कि जीटीएका लेखकहरूले भनेका छन् कि खेल पनि छ पतंग। विकासकर्ताहरूका अनुसार २ खेलहरू एक चरित्रको बारेमा छन् जसले नक्सामा भएका बिन्दुहरू (पैदल यात्री / ट्याब्लेटहरू) लाई अगाडि बढाउँछन् जबकि उनका विरोधीहरू (प्रहरीहरू / भूतहरू) पीछा गर्छन्।
प्याक-म्यानको बारेमा मनोरञ्जनात्मक तथ्यहरू
१ teen अस्सीबाट मौलिक खेल चौधहरु मध्ये एक हो जुन खेलहरूबाट संकलनको अंश हो न्यू योर्क शहर आधुनिक कला को संग्रहालय।
प्याक म्यान समावेश भएको पहिलो खेल थियो एक तत्व को माध्यम द्वारा अस्थायी शक्ति मैकेनिक्स। यो विचार पालकसँग पोपेको सम्बन्धबाट प्रेरित भएको थियो।
खेलका प्रत्येक विपक्षीको व्यक्तित्व फरक हुन्छ। यो स्पष्ट हुन्छ जब हामी जापानीमा तिनीहरूको नामहरू हेर्दछौं: रातो oikake (स्टकर), माचीबुज गुलाबी (घात) किमागुरे निलो (अस्थिर) र Otoboke सुन्तला (मूर्ख)। अ In्ग्रेजीमा, नामहरू ब्लिंकी, पिन्की, इन्की र क्लाइडको रूपमा अनुवाद गरिएको थियो।
जे होस् खेल अनन्त छ, तपाईंसँग एक उत्तम खेल हुन सक्छ। समावेश गर्दछ जीवन गुमाउन बिना दुई सय पचास स्तर समाप्त र खेल मा प्रत्येक र हरेक वस्तु स collect्कलन। यसका अतिरिक्त, प्रत्येक र हरेक स्पेक्ट्रा प्रत्येक शक्ति अप कार्य संग खपत हुनु पर्छ।
खेलको फ्रान्चाइजीलाई सम्मान गर्न, Google ले खेलको th० औं वार्षिकोत्सवमा प्याक-म्यानको एक खेल योग्य संस्करणलाई स्क्रिप्ट गर्‍यो।